အဖေအစစ် ကို သူတို့မသိကြဘူး.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဖေအစစ် ကို သူတို့မသိကြဘူး..
အဖေအစစ် ကို သူတို့မသိကြဘူး..
Posted by Ko out of... on Feb 16, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ကိုယ်မွေးတဲ့ ကလေးက အဖေကို မှတ်မိအောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက အမှတ်သညာ ထဲ့ပေးရတယ်။ မယုံရင် ရေခြားမြေခြားမှာ စီးပွါးရေးရှာတဲ့ အဖေများဆိုရင်…ဝေးဝေးတစ်ခေါက်မှ ပြန်လာတော့ သူ့သားသမီးက သူ့အဖေကို မမှတ်မိတော့ဘဲ အဖေကိုခေါ်ဖို့ ၀န်လေးနေတယ်။
ဒါငယ်ငယ်တုံးက သူ့အဖေမှန်းသိအောင် အမှတ်သညာ ကို ကောင်းကောင်းမထဲ့ခဲလို့ ၊ အသင်ကြားမခံ ခဲ့ရလို့ဘဲ။ ဒါကို ကလေး အဖေ အစစ်ဘဲလို့ပြောလည်း ကလေးက မမှတ်မိဘဲ နောက်ထပ် အိမ်ထောင် ပြုတဲ့ ပထွေးကိုဘဲ အဖေအစစ်ဆို ပြီး ပြောတဲ့လူကိုတောင် လူလိမ်လို့တောင် ကလေး ကအပြစ်တင် ဦးမှာ ကတော့ အသေချာပါ..
ယနေ့ မိရိုးဖလာမှာ နှစ်မွန်းနေတဲ့ လူတွေလည်းဘဲ ယခုသူတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားကို ဘုရား အစစ် မဟုတ်ဘူးလို့ သွားပြော ကြည့်ပါလား သူတို့ လက်မခံဘူး။ သူတို့က ပထွေးကိုဘဲ အဖေ လို့ခေါ်ချင် သေးတာကို.. ဒါငယ်ငယ် ကတည်းက အသင်ကြားမခံ ခဲ့ ရလို့ဘဲ။
ဒို့လည်း အသင်ကြား မခံခဲ့ရပါဘူး ၊ မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာ ကြားမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ လူပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒို့ ကို အဲဒါမင်းအဖေ အစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို
အချက် အလက်ကျကျ ပြောပြနိုင်တဲ့လူ ကိုလည်းတွေ့ခဲ့တယ်… သူပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကိုလည်း အပြော နဲ့ လက်တွေ့ တစ်ထပ်ထဲ ဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် ဥာဏ်အဖြစ်ဝေဖန် ဆန်းစစ်နိုင် ခဲ့လို့ အဖေ အစစ်ဆိုတဲ့ ဘုရား ကိုတော့ ဒို့တွေ့ပြီ လို့ပြောရတာပါ..
အဖေ အစစ်လို့ ခေါ်ချင်သူများ သိမြင်ခွင့်ရပါစေ ဆိုပြီး…..
(ယနေ့ မိရိုးဖလာမှာ နှစ်မွန်းနေတဲ့ လူတွေလည်းဘဲ ယခုသူတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားကို ဘုရား အစစ် မဟုတ်ဘူးလို့ သွားပြော ကြည့်ပါလား သူတို့ လက်မခံဘူး။ သူတို့က ပထွေးကိုဘဲ အဖေ လို့ခေါ်ချင် သေးတာကို.. )ဆိုတော့
K-Red အနေနဲ့က အဖေအစစ်က ဘယ်လို၊ ပထွေးက ဘယ်ပုံစံဆိုတာလေးတော့ ပြောဖို့တော့လိုမှာပေါ့။
အထူးအထွေပြောနေဖို့ မလိုဘူးထင်တယ်.. ပထွေးနဲ့ ဘယ်သူမှ အတူမနေချင်ပါဘူး..ကိုယ့်အပေါ်ကို အပေါ်ယံ လောက်ဘဲ ချစ်မှာပါ… ကိုယ့်အမေ ဆိုတဲ့ လာဘ်ကို ရဖို့ ဘဲ သူမြင်တာ ဖြစ်ရမယ်..
ခင်တဲ့ ကွမ်းထောင်ကိုင် မဖရဲ။
ဘာပြောချင်မှန်းကိုမသိတာ။ အခုတလော MG မှာဒီလိုပို့စ်တွေ များလာပြန်ဘီမှတ်တာဘဲ။ ပြောချင်ရာပြောပြီး သများတို့ကို အားကျလို့ပြေးလိုက်အုံးမယ်။ ၀ှစ် ၀ှစ် ၀ှစ်
အဖေ ဘယ်သူ့ခေါ်မရမလဲ ပြဿနာတက်နေပါက အမေ့ကိုမေးလိုက်ပေါ့။ ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ပါလား။
အင်း မြန်မာရိုးရာထေရ၀ါဒက ရှေ့ဘ၀၊နောက်ဘ၀အယူတွေနဲ့ ပရမတ္တသစ္စာအယူတွေကို ဂေါတမဗုဒ္ဒဟောတယ်လို့ယူတယ်။ အဲဒါအဖေအစစ်တဲ့။
အရိယသစ္စာဝါဒီတွေက ရှေ့ဘ၀၊နောက်ဘ၀အယူတွေနဲ့ ပရမတ္တသစ္စာအယူတွေက ဂျိန်းနဲ့ ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အယူတဲ့။ ဗုဒ္ဒအယူမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် အဖေအစစ်မဟုတ် ပထွေးတဲ့။
အခု K-Red က ပထွေးကိုဘဲ အဖေ လို့ခေါ်ချင်နေတယ်လို့ပြောနေပြန်တော့ အဖေတွေဖောင်းပွတော့မလားပဲ။
အဖေစစ်/ မစစ်သိချင်ရင် အမေ့ကိုမေးကြည့်ပေါ့။
ဒါဆိုရင် အမေကဘယ်သူလဲ ?
ဗုဒ္ဒက သူ့တရားတွေဟာ အရည်အချင်း (ဂုဏ်ရည်) ၆-ချက်ရှိရမယ်တဲ့။
အဲဒီ တရားဂုဏ်ရည် ၆-ချက်နဲ့ ညီအောင်ပြဆိုထားတာဟာ အဖေအစစ်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သေပြီးနောက်ဖြစ်/မဖြစ်တရားတွေဟာ တရားဂုဏ်ရည် ၆-ချက်နဲ့ ညီ/ မညီ ကို
အဖေမသိရင် အမေ့ကို မေးကြည့်ဆိုတာနဲ့ အဖေစစ်တမ်းထုတ်လိုက်ပါ၏။
Mggwa ပြောတာ သဘာဝကျပါတယ်။ K Red ဘယ်သူ က အဖေ ဘယ်သူ က ပထွေးဆိုတာကို ခင်ဗျားလက်ခံထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး သေသေချာ ရှင်းပြနိုင်မလား။
အမေကိုမေးလို့ မပြီးပါဘူး… ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ အမေက သူ့ရဲ့ ငယ်နှောင်းကို လာဘ်စသည် တခုခုကိုမြင်ပြီး ချစ်တာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မုန်းလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မဟုတ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ် ဆိုတာ ကလေးကိုအ ကြောက်တရား၊ အချော့ တရားတွေနဲ့ ပြောရင် ကလေးကို အတင်းယုံခိုင်း သလို ဖြစ်နေရင် လွတ်လပ်မှု မပါတော့.. ဟုတ်၊မဟုတ် ကလေးကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခွင့် ပေးမှ ကလေးဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ သူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်….
ဒါကိုဘာကသက်သေခံနေသလဲဆိုရင် ဘုရားဟောတဲ့ ကုလာမသုတ်မှာ ပါတဲ့ ၀ိဘဇ(၀ိဘစ်ဇ)ဝေဖန်စိစစ်နိုင်တဲ့ တရားဆယ်ချက်ထဲက နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ငါဘုရားပြောတာကို
ဟုတ်တယ် မှန်တယ်ဆိုပြီး မယုံလိုက်ပါနဲ့ဦး… သေချာစိစစ်ပြီး လောကဘ၀မှာ လက်တွေ့ အသုံး
ချကြည့်ပါ…သုံးလို့ရရင်ယူ သုံးလို့ မရရင် မယူနဲ့လို့ ဟောထားပါတယ်… ဒီလောက်အထိ လွတ်လပ်တဲ့ တဲ့ ဘုရားစကားက သက်သေခံနေပါတယ်.. အဖေအစစ်ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ….
ဒီမှာတော့ ပစ်စုပ်ပန်ဂိုဏ်းသားတွေက ဒါမှတို့အဖေတဲ့
ဟုတ်မဟုတ်တော့ အချိန်ကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ အဖေနဲ့သားတွေ
မဟနကြောင့် ယူပါ ကယ်ပါ ဖြစ်နေလေရဲ့။
ကိုယ်မွေးတဲ့ ကလေးက အဖေကို မှတ်မိအောင် ငယ်ငယ်ကတည်းက
အမှတ်သညာ ထဲ့ပေးရတယ်။ မယုံရင် ရေခြားမြေခြားမှာ စီးပွါးရေးရှာတဲ့ အဖေများဆိုရင်…ဝေးဝေးတစ်ခေါက်မှ ပြန်လာတော့ သူ့သားသမီးက
သူ့အဖေကို မမှတ်မိတော့ဘဲ အဖေကိုခေါ်ဖို့ ၀န်လေးနေတယ်။
အဖေစစ် မစစ်ဆိုတာ အဓိက ကအမေ အသိဆုံးပါ။မိရိုးဖလာဆိုတာဘယ် လူမျိုး မှာမဆိုရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသ္ဓာဟာမိရိုးဖလာဖြစ်သလို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ကိုးကွယ်နေတြတာပါ။သေချာတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ တခြားဘာသာတွေလို မစည်းရုံးဘူး။သွေးမဆောင်ဘူး။ယုံကြည်မှ ကိုးကွယ်နိုင်တယ်။ခုခေတ် ဖြစ်ပေါ်နေတဲု့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဗုဒ္ဓ ဟောထားခဲ့တာတွေ တထပ်တည်းကျနေတယ်။
ကဲ အဖေအစစ်ဟာ ဘုရားဘဲ… ဘုရားကိုယ်တိုင် ငါအဖေစစ်ပါဆိုတာ မယုံလိုက်နဲ့ဦးတဲ့…
ငါဟောတဲ့ တရားကို… လက်တွေ့ လောကမှာ အသုံးချကြည့် ရရင်သုံး မရရင် မသုံးနဲ့ဆိုတာ ကိုက… ဘယ်လောက် လွတ်လပ်လဲ…ဘုရားတရားဟာ သူများကိုအားကိုးဖို့ ၊ သူများကို ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ပေးဘူး…ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆုံဖြတ်ရ
မှာ…ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင် မထမ်းခေါ်သွားဘူး.. လမ်းညွှန်သူတာဖြစ်တယ်….